Xildhibaano G.Wakiiladda U Gudbiyay Mooshin Ka Dhan ah Haayadda Caymiska Qaranka | Gabiley News Online
September 22, 2021 - Written by admin
Xildhibaano ka tirsan golaha Wakiiladda Somaliland ayaa golahaasi u soo gudbiyay mooshin la xidhiidha hab-raaca xil gudashadda haayadda Caymiska iyo fulinta go’aamadda maxkamadda sare.
Waxaana soo jeedinta mooshinkaasi fadhigii maanta ee golaha Wakiiladda ka hor akhriyay xildhibaan C/rashiid, oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha Wakiiladda Somaliland.
Mooshinkaasi ayay xildhibaanadaasi u cuskadeen in iyagoo ka duulaya qodobka 42aad ee xeer hoosaadka golaha Wakiiladda Somaliland ee xeer LN.12/2020 oo dhigaya in ay mudaneyaashu xaq u leeyihiin in ay soo gudbiyaan oo ay soo qoraan codsi mooshin.
Kaasoo ay ku soo hagaajinayaan xoghayaha guud ee golaha Wakiiladda, sidoo kalena ay maanka ku hayaan nuxurka ku tilmaaman xeerka Caymiska qaranka 92/2021 iyo ahmiyadda balaadhan ee ay xanbaarsan yihiin addeegyadda ay haayadda caymisku qaranka u xil saaran tahay.
Waxa kaloo ay xildhibaanadaasi soo jeedintoodda ku sheegeen in iyadoo sidoo kale ahmiyad siinaya cabashooyinka ay golaha Wakiiladda u soo gudbiyeen ganacsatadda gaadiidleyadda dalku, isla markaana tixgelinayna duruufaha iyo qabyadda la xidhiidha Caymiska.
DAAWO: Xildhibaan C/rashiid Oo Soo Jeedinta Mooshinkaasi Akhriyaya: